HTML Email + Alt Tags = Mamwe maBagels Anotengeswa | Martech Zone
Manheru ano ndagamuchira email kubva Panera Bread. Kufanana nezvakawanda zvirongwa zveemail mazuva ano, yangu email application inongozvivharira mifananidzo. Nekuda kweizvozvo, izvi ndizvo zvakaita email.
Kwete kumanikidzawo… kunyanya kune yakanaka email iyo yaitaridzika seiyi:
Handikwanise kufungidzira kuti vangani vanhu vakabvisa email vasina kuiverenga nekuti… paive pasina chekuverenga kana iwe ukasatorera mifananidzo. Iri idambudziko chairo nemaHTML emaema… asi zviri nyore kwazvo kudzivirira.
Maitiro maviri Akanaka Ekubatsira Kuvhura Mitengo paHTML Emails
Usaratidze mavara semifananidzo… ratidza seyinyorwa. Chokwadi hazvisi kuzove zvakanaka kwazvo, asi zvichaverengeka - mutsauko wakakura. Panera yaifanirwa kunge yakapwanya mifananidzo uye zvinyorwa muemail izvo zvingangodaro zvakatora mugadziri wavo mamwe maminetsi mashoma, asi ivo vangadai vakatengesa akawanda akawanda mabhegi!
Dai vagadziri vacho vanga vakanyatsoisa pakushandisa 100% yemifananidzo-based HTML email, vangadai vakashandisa chinhu chose ma tag pane yega yega mifananidzo yekuwedzera anomanikidza mavara. Kune iyo chikamu chevaverengi vane zvirongwa zvinovharira mifananidzo, vangangodaro vangave vakaverenga nezve iyo nyowani yeMediterranean Salmon Salad, Asiago Bagel Breakfast Sandwich, Black Cherry Smoothie uye Morning Bagel mapakeji kubva mune zviri mune iyo tag tag.
Kupedza imwe maminetsi mashoma uye kuzadza maalt tags (alt ndeimwe zvinyorwa uye inoratidzwa kana mifananidzo isiri) ichavandudza ako akavhurika mareti uye mitengo yekutendeuka pane email yeHTML seizvi. Zvinoita kunge maemail aya akagadzirwa ne Samaki… Kunzwisisa kwangu ndekwekuti vane epamberi email mupepeti mune dzese shanduro dzekushandisa kwavo dzinotsigira izvi.
Chikafu chinoraira mifananidzo… uye hapana mubvunzo kuti mamwe mameseji anomanikidza achakwevera vazhinji vanonyoresa kurodha mifananidzo uye nekuwedzera iyo email kero kune yavo yakachengeteka runyorwa.
Zvakare, ndinotenda vazhinji veInternet Service Provider mureza maemail ayo asina chero zvemukati uye ese mifananidzo nekuti inzira yeva spammers kutumira kuburikidza nehurombo. Panera inogona kuvandudza mwero wayo wekuendesa pamwe nekushandisa mamwe mavara mukati meiyo email.
Tags: blackberry maringe iphonebrand awarenesskurambakutenga sarudzomanzwirokutsvakurudza kwevanhu
Ndira 26, 2010 na11: 31 PM
Ingo wedzera-on: imwe nzira yekuchengetedza imwe nhanho yekugadzira / brand kuvimbika kungave kuumba inline zvitaera zveemail kutenderedza ALT zvinyorwa zvemufananidzo. Saka kugadzira ALT zvinyorwa kuita semusoro wenyaya nekuzvikomberedza ne , semuenzaniso wakapusa.
Imwe uzivi yandaigara ndichinzwa ndeyekufungidzira kuti mifananidzo ichave iri kure - kushandisa mifananidzo seyakareruka, asi isingakoshi, inoenderana neye email. Nguva dzose zvakanaka kuyeuchidza vagadziri!
Chaicho husimbe. 🙁
Kukadzi 2, 2011 na6: 18 PM
Zvakanaka kutumira, ndine chokwadi chekuti munhu wese akazviona izvi mubhokisi ravo rezvakanyorwa, kunyangwe iwo muenzaniso uri pamusoro wakanyanya kushata! Icho chidimbu chakanakisa zvekuti vazhinji vanogadzira email vanokanganwa